ဆက်သွယ်ရေး ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ ASR Microelectronics သည် Shanghai Star Market တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့ပြီး စတော့ရှယ်ယာ သည်ပထမ ဆုံးအကြိမ် ကျဆင်းသွား သည် - Pandaily
ဆက်သွယ်ရေး ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ ASR Microelectronics ကို သောကြာ နေ့တွင် တရားဝင် ရောင်းချ ခဲ့သည်Shanghai Technology Innovation Board (Star Market)သို့သော် အရောင်းအ ၀ ယ် ၏ပထမ နေ့တွင် ၎င်း ၏ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအထိ ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာ သည် ၃၄% ကျော် ကျဆင်းခဲ့ပြီး ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ယွမ် ၁၀၈. ၅၅ (၁၇. ၀ ၇၄ ဒေါ်လာ) သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကြိုးမဲ့ ဖြေရှင်း ချက်များ နှင့်အလွန် ကြီးမားသော ချစ်ပ် များကို ထောက်ပံ့ပေးသော ပလက်ဖောင်း အခြေပြု ချစ်ပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပလက်ဖောင်း အခြေပြု ချစ်ပ် ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပြည့်အဝ စံ ဆယ်လူလာ baseband ချစ်ပ် များနှင့် multi-protocol မဟုတ်သော ဆယ်လူလာ အင်တာနက် အရာ များ (IoT) ချစ်ပ် များ ကိုသုတေသနပြု ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခြင်း နှင့်အလွန် ကြီးမားသော မြန်နှုန်းမြင့် SoC ချစ်ပ် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ အိုင် ပီ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သည် ဆယ်လူလာ baseband ချစ်ပ် များ၊ ဆယ်လူလာ မဟုတ်သော IoT ချစ်ပ် များ၊ AI ချစ်ပ် များနှင့်အခြား ထုတ်ကုန် များပါ ၀ င်သည်။ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေး ချစ်ပ် ၂၅ မျိုး ကျော်ကို အကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် ဆယ်လူလာ module ဆက်သွယ်ရေး ချစ်ပ် များ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး သန်း ၈၀ ကျော် ရောင်းအား ရှိပြီး စုစုပေါင်း ချစ်ပ် ဝ င်ငွေ၏ ၇၀% ကျော်ရှိသည်။ ဆယ်လူလာ မဟုတ်သော IoT ချစ်ပ် များသည် သန်း ၄၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဆယ်လူလာ ချစ်ပ် များကို အဓိကအားဖြင့် 4G ဆက်သွယ်ရေး module များ အတွက်အသုံးပြုသည်။ ZTE, 360, TP-Link နှင့်အခြား ကြီးမားသော အမျိုးသား စွမ်းအင် ဇယားကွက် ကုမ္ပဏီ များ၏ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် စနစ် သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ASR3601 ကို feature ဖုန်း များအတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီသည် စမတ်ဖုန်း baseband ချစ်ပ် များမှ ၀ င်ငွေ မရ သေးပါ။
ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နောက်ခံ ၏ စည်းကမ်း ချက် များ၌, ၎င်း၏ prospectus ကုမ္ပဏီ၏ တစ်ခုတည်း အကြီးဆုံး ရှယ်ယာရှင် Alibaba Group Holding Limited (တရုတ်) ကွန်ယက် နည်းပညာ Co., Ltd (နောင် တွင် အလီ ဘာ ဘာ အဖြစ် ရည်ညွှန်း) ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ရှယ်ယာ 17.15%, အမှန်တကယ် controller ကို Dai Baojia ထက် ကုမ္ပဏီ၏ 9.36% ရှယ်ယာ တိုက်ရိုက် ပိုင်ဆိုင် ကြောင်း ထက်ပိုမိုမြင့်မား ကြောင်းပြသ ထားတယ်။ သို့သော် Alibaba သည် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင် မဟုတ် သကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ် သူ အဖြစ်သတ်မှတ် ခြင်းမရှိပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:DeepGlint ကို Shanghai Star Market တွင် ရောင်းချ မည်
ထို့အပြင် Hubei Xiaomi Changjiang စက်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ မိတ်ဖက် သည် ကုမ္ပဏီ၏ အစု ရှယ်ယာရှင် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ရှယ်ယာ အချိုး ၁. ၀၉% ရှိသည်။ ယင္း ၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူ တစ္ဦးမွာ ေပက်င္း အေျခစိုက္ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ ကုမၸဏီႀကီး Xiaomi Technology ျဖစ္သည္။
အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီသည် နည်းပညာ စုဆောင်း ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ လိုအပ် သောကြောင့် ငွေ များ ဆုံးရှုံး နေဆဲဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော သုံး နှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုသည် ၀ င်ငွေ၏ ၂၀၂. ၇၄% ရှိပြီး စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှာယွမ် ၃. ၂ ၃၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ၀၈. ၄ သန်း) ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၀ င်ငွေ ၁. ၀ ၈၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၇၀) ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၁၇၁. ၆၄% တိုးတက်မှုနှင့် အသားတင် အရှုံး ယွမ် ၂. ၃ ၂၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ၆၆ သန်း) ၊ ၀ န်ထမ်း ရှယ်ယာ မက်လုံး မှာယွမ် ၁. ၇ ၆၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၇၇ သန်း) ဖြစ်သည်။ ဤ ထပ်တလဲလဲ မဟုတ်သော ၀ င် ငွေကို နုတ်ယူ ပြီးနောက် ယခုနှစ် စုစုပေါင်း အသားတင် အရှုံး သည်ယွမ် ၅ ၇၂ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၉. ၉ ၇၅ သန်း) ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ မှ ဇွန် လအထိ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် လည်ပတ် မှုမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၈ ၁၇ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၂၈ ၅၁. ၄ သန်း) နှင့် ယွမ် ၉ ၀၃ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၁၄. ၂ ၀၄ သန်း) အကြား ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၈၁. ၁၈% မှ ၁၀၀. ၂၅% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။